News - တုပ်ကွေးသို့မဟုတ် COVID-19? ကျွန်ုပ်တို့၏ multiplex PCR ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာသည်သင့်ကိုခွဲခြားရန်ကူညီနိုင်သည်
တုပ်ကွေးသို့မဟုတ် COVID-19? ကျွန်ုပ်တို့၏ multiplex PCR ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာသည်သင့်ကိုခွဲခြားရန်ကူညီနိုင်သည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ လမှစ၍ coronavirus သစ် (2019-nCoV / SARA-CoV-2) သည်ကမ္ဘာတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသူသို့မဟုတ်သယ်ဆောင်သူများအားလက်ရှိတိကျသောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိကာလသည်အမျိုးမျိုးသောတုပ်ကွေး A ဗိုင်းရပ်စ် - တုပ်ကွေးဘီဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြားဆက်စပ်သောဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားသည်။ Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်၏ရောဂါလက္ခဏာနှင့်တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏အစောပိုင်းလက္ခဏာများသည်အလွန်တူညီကြသည်။ တရုတ်အမျိုးသားတုပ်ကွေးကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၂၀ ခုနှစ်ထုတ်ဝေ) ကရှင်းလင်းစွာကြိုတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများ၏ရောဂါပိုးများစွာကိုပူးတွဲဖော်ထုတ်ခြင်းအားမြှင့်တင်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးများစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကိုအထူးသဖြင့်အသစ်သောရောဂါလက္ခဏာသစ်ကိုရှာဖွေခြင်းကိုထောက်ခံသည်။ coronavirus နှင့်တုပ်ကွေး A / B ကိုဗိုင်းရပ်စ်။ ။
CHK Biotech မှစတင်ခဲ့သော COVID-19 + တုပ်ကွေး A / B PCR ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာ
Coronavirus အသစ်မှအပအခြားဘုံအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပိုးများကိုစစ်ဆေးရန်အထူးဂရုပြုထားသည်။ သို့သော်တုပ်ကွေး A / B ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရောဂါလက္ခဏာများသည် coronavirus အသစ်၏လက်တွေ့လက္ခဏာများနှင့်ဆင်တူသည်။ Coronavirus နယူမိုနီယမ်အသစ်များသို့မဟုတ်သံသယရှိသောလူနာများနှင့်အတူလူနာများကိုအတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်မှန်ကန်သောလက်တွေ့ခွဲခြားခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့ကိုအချိန်မီပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အခြားရောဂါများ (အထူးသဖြင့်တုပ်ကွေး A နှင့်တုပ်ကွေး B) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။ လက်တွေ့အဖြစ်မှန်အတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့ကြီးစွာသောဒုက္ခ။ ထို့ကြောင့် CHK Biotech သည်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန် COVID-19 / AB multiplex detection စနစ်အစုံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကိရိယာသည် COVID-19 လူနာများနှင့်တုပ်ကွေးရောဂါလူနာများကိုစစ်ဆေးပြီးခွဲခြားရန်ဗိုင်းရပ်စ် (၃) ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက်အချိန်မှန် PCR နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့တွင်အပြုသဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ဒီထုတ်ကုန်၏အားသာချက်များ: မြင့်မားသော sensitivity ကို; မှားယွင်းသောအနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များကိုထိရောက်စွာရှောင်ရှားနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးတွင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် coronavirus အသစ်၊ တုပ်ကွေး A၊ တုပ်ကွေး B နှင့်အတွင်းပိုင်းထိန်းချုပ်မှုဗီဇများကိုဖုံးအုပ်ထားသောပစ်မှတ် ၄ ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ လျင်မြန်ပြီးတိကျသောရှာဖွေတွေ့ရှိချက် - နမူနာစုဆောင်းခြင်းမှ ၁ နာရီနှင့်မိနစ် ၃၀ သာကြာသည်။
အသစ်၏ amplification ကွေး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်/တုပ်ကွေး A / B ကိုသုံးပေါင်းစပ်ထောက်လှမ်းဓါတ်ကူပစ္စည်း
Coronavirus ကူးစက်ရောဂါအသစ်သည်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း၏အရေးကြီးသောအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သောသြဇာသက်ရောက်သောအချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနည်းလမ်းများ၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနည်းလမ်းများနှင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းနည်းလမ်းများသည်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုဆက်လက်တင်ပြသည်။ CHK Biotech သည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူမှုရေးတာဝန်များကိုအမြဲထမ်းဆောင်ရန်ရဲရင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုအဆက်မပြတ်ကျော်လွှားခဲ့ပြီး coronavirus ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်များနှင့်ဆက်စပ်သောထုတ်ကုန်အသစ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သတ္တိရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်သာဆက်လက်ကြီးထွားနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို CHK Biotech သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုအရောင် တင်၍ ဘဝသိပ္ပံ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးနယ်ပယ်များတွင် "တီထွင်ဆန်းသစ်မှု" နှင့် "တီထွင်ဆန်းသစ်မှု" ကိုအသုံးပြုသည်။
post အချိန်: မတ်လ -12-2021